अनुहार सफा चम्किलो बनाउँन र दाग हटाउन तपाईपनि रोज्नुहोस् यस्तो विधि – Jagaran Nepal
अनुहार सफा चम्किलो बनाउँन र दाग हटाउन तपाईपनि रोज्नुहोस् यस्तो विधि
काठमाडौ । अनुहारको छालालाई सफा र चम्किलो बनाउने रहर कसको पो हुन्न र ? हेर्दा आहा क्या सुन्दरी देखिन कसलाई पो मन छैन र । तर यस्ता प्रविधि आएका छन् तपाईको त्यो चाहा अब पुरा हुनेछ । नेपालमापनि केमिकल पिलिङ विधि आएको छ । यो एक उपचार विधि हो । यो विधि फेसियल भन्दा प्रभावकारी रहेको छ । क्रिष्ट हस्पिटलमा छाला रोग बिशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा कार्यरत डा. रीमा श्रेष्ठले यो विधिबाट धेरैलाई चम्काएकी छिन् ।
उनी भन्छिन् यो एउटा फेसियल जस्तै हो । तर यसमा मेडिकल्ली उपचार गरिन्छ । अनुहारमा कुनै प्रकारको दाग हटाउन तथा कम गर्नको लागि यो उपचार गरिन्छ । यसमा विभिन्न प्रकारका अल्फा हाइट्रोसि ए सिडहरुलाई मिलाएर गर्ने उपचार विधी हो । यसबाट पिम्पलका दागहरु, घाउका दाग, कालो धब्बा जस्तै चायाँ, पोतो आदिमा मल्हम औषधीसंगै केमिकल पिलिंग गऱ्यो भने छिट्टै नतिजा आउँछ । साथै अनुहारमा कुनै प्रकारको दाग धब्बा नै नभए पनि फेसियलको सट्टा केमिकल पिलिंग गर्न सकिन्छ । जसले स्किन चम्किलो, सफा र नरम बनाउन मद्धत गर्छ ।
उनका अनुसार नेपालमा ३० थरिका केमिकल पिलिंग उपचार छन् । छालाको प्रकार र रोगको अवस्था अनुसार डाक्टरको सल्लाह बमोजिम कुन उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्दा राम्रो नतिजा आउँछ । यो २ देखि ३ हप्तामा १ पटक गराउनु पर्छ । यसरी नियमित ६ पटक गर्दा छाला राम्रो हुन्छ । पछि फेसियलको सट्टा यही पिलिंग गराउँदा पनि हुन्छ । पिलिंग गरेको १–२ दिन सम्म छाला जाने वा रातो हुन सक्छ तर डाक्टरले दिएको मल्हम लगाउने र एक हप्ता जति घामवाट जोगाउनु पर्छ । अन्य कुनै साइड इफेक्टहरु हुदैंनन् । यसमा हुँदैन । यो विधिबाट उपचार गराउँदा मसिनो चाउरीपना हट्छ, अनुहारमा दागधब्बा रहदैंन । यो अन्य उपचार भन्दा सस्तो उपचार हो । एक पटक गराउँदा छाला र त्यसको समस्या हेरेर १ हजार देखि २ हजार रुपैंयासम्म पर्छ । यो उपचार टिनएजर देखि ६०–७० बर्षसम्मका लागि गर्न मिल्छ । अर्थात राम्रो हुने चाहना भए सम्मकाले गर्दा केही फरक पर्दैन ।